नेपालमा तेस्रो लहर अब चाँडै आउँछ: विज्ञहरू
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार २१:५२ | Aadil Times
एक वर्षअगाडि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरसँग जुधिरहेका छन्, विश्वका अधिकांश देश। विज्ञहरूले भने अब तेस्रो लहर सुरु हुने अनुमान गरिरहेका छन्।
उनीहरूका अनुसार यो लहरमा बालबालिका सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेछन्।
सोहीअनुसार केही दिनअगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई तेस्रो लहरमा बालबालिका प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सबै अस्पताललाई २० प्रतिशत शय्या छुट्याएर राख्न अनुरोधसमेत गरेको थियो।
कतिपय चिकित्सकले नेपालमा तेस्रो लहर सुरु भइसकेको समेत उल्लेख गरेका छन्। तर, तेस्रो लहर सुरु भयो भन्दा पनि दोस्रो घट्न ढिलो भइरहेको बताउँछन्, जनस्वास्थ्यविद् डा. केदार बराल।
‘अहिले नेपालमा दोस्रो लहर घट्दै छ। अब यसैलाई तेस्रो लहर भन्ने कि? दोस्रो लहर अलि घटेपछि मात्रै तेस्रो लहर सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर, ठ्याक्कै यतिबेला नै तेस्रो लहर सुरु भयो वा हुन्छ भन्ने हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘दोस्रो लहर घट्दै छ। तर, संक्रमण दर घटे पनि टेस्ट सधैँ बराबर भइरहेको छैन।
‘हामी केस र टेस्ट रेसियो भन्छौँ। त्यो रेसियो उल्लेख्य मात्रामा घटेको छैन। असको अर्थ के हुन्छ भने टेस्ट थोरै भएको दिनमा पनि केस टेस्ट रेसियो हेर्‍यो भने त्यस्तो घटेको हुँदैन। टेस्ट थोरै भएपछि पोजेटिभ केस थोरै हुने नै भयो। यी सबै तथ्यांकलाई एकदमै मसिनो गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘अर्को कुन ठाउँ वा लोकालिटी हो। यो सबै हेरेर टेस्ट कहाँको मानिसमा धेरै भइरहेको छ। कहाँ थोरै भइरहेको छ। कहाँ पोजेटिभ कम छ र कहाँ कम छ। यी सबै कुरा हेरेपछि मात्रै यसबारे गहिरो गरेर तथ्यपूर्ण ढंगले भन्न सकिन्छ।’
जसकारण अहिले नै तेस्रो लहर सुरु भएको भन्ने बेला भइनसकेको डा. बरालले बताए।
‘मचाहिँ तेस्रो लहर सुरु भयो भन्दिनँ। अहिले हामी अँध्यारोमा हिँड्दै छौँ। होस्पूर्ण बोल्ने। होस् नीति व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने।
केस घटेको वा बढेपछि विचार बनाउनु वा नीतिगत कुरा बोल्नु जनस्वास्थ्यको हिसाबले त्यो तथ्यपूर्ण नभएको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘दोस्रो लहर कम भए सँगसँगै स्वाट्टै बढ्न थालेपछि त्यसलाई तेस्रो लहर भनिन्छ। विगत हेर्दा पहिलोभन्दा दोस्रो लहर ठूलो तर दोस्रोभन्दा तेस्रो अलि सानो देखिएको छ।’ डा. बरालका अनुसार तेस्रो लहरमा संक्रमण कम हुने देखिएको छ।
यसमा पनि अनुभव र विगतका तथ्यलाई नै हेर्ने गरिन्छ। तेस्रो लहरमा सतर्कता अपनाउन नसक्दा बालबालिका धेरै संक्रमित हुने उनले बताए।
अहिले पनि धेरै बच्चा संक्रमित भएको उनले बताए।